Nnukwu Ọrụ: A Iji Mee Ndepụta na Timestamp App | Site na Linux
Super arụpụta: A Iji Mee List & Oge Ndepụta App
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ, ma ọ bụ n'ihi ebumnuche onwe ha ma ọ bụ mkpa ọrụ, na-amasịkarị ngwanrọ ngwanrọ jupụta na arụmọrụ, bọtịnụ na ngwa, ndị ọzọ na-ahọrọkarị nke ọzọ, ndị ahụ bụ dị mfe, kwụ ọtọ ruo n'ókè, n’ihi na ha na-enwe mmụba na ha arụpụta ihe, site n'inwe obere ihe ndọpụ uche. Typedị ihe ndọpụ uche a na-eme ọtụtụ, na ngwa ngwa akpaaka nke ụlọ ọrụ, nke na-etinyekarị ọrụ dị ukwuu maka onye ọrụ.
Nke bụ ihe kpatara eji arụ ọrụ ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ iji nyere ndị ọrụ aka ịmatakwu ihe ha kwesịrị ime. N'ebe ọrụ na ọkachamara, ngwa ahụ "Super arụpụtaghị"ma ọ bụ "Superproductivity", na Spanish, pụtara n'ihi na ọ bụ ngwa bara uru ma na-atọ ụtọ maka Ndepụta Ọrụ (Ime) y Oge Tracker maka programmers na ndị ọzọ dijitalụ ọrụ na mwekota nke Jira, Github na Gitlab.
Tupu m malie ozugbo na "Super arụpụtaghị", anyị chọrọ ịgbakwunye na ngalaba nke arụpụtaghị na sistemụ arụmọrụ GNU / Linux nke anyị nwere ekele, anyị kwukwara maka ndị ọzọ ngwa dị mkpa ka ị na-arụpụtakwu ihe na ha, yabụ anyị hapụrụ gị n'okpuru, ụfọdụ yiri gara aga posts na isiokwu ahụ, ka ị nyocha ma gụọ mgbe ị gwụchara akwụkwọ a:
Albert na Kupfer: 2 magburu onwe pitchers dị ka ndị ọzọ na Cerebro
Dmenu na Rofi: 2 Ezigbo ndị na-ebupụta ngwa maka WMs
1 Nnukwu arụ ọrụ: App To-Do & Time Tracker
1.1 Gịnị bụ Super arụpụtaghị?
1.2 Isi atụmatụ
1.3 Ihuenyo gbaa
Nnukwu arụ ọrụ: App To-Do & Time Tracker
Gịnị bụ Super arụpụtaghị?
Abụọ n'ime ya ukara website na web na na GitHub, a kọwara ya dị ka ndị a:
"A Personal To Do List, Time Tracking and Task Manager application, ezigbo maka programmers na ndị ọzọ dijitalụ ọrụ, nke nwekwara njikọta na Jira, Github na Gitlab nyiwe. Tụkwasị na nke a, ọ bụ ikpo okwu (Linux, MacOS na Windows) na ebumnuche ya bụ iji belata oge ndị ọrụ na-eji eme ihe ugboro ugboro na iji nye ebe iji kpokọta ozi niile achọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ."
Enye ohere atụmatụ, nsuso na ichikota ihe omume: Site na ịmepụta mpempe akwụkwọ oge na nchịkọta ọrụ, na ntabi anya, nke enwere ike ibupụ ya na ngwa ndị ọzọ.
Ọ nwere njikọ dị mma na nyiwe Jira, GitHub na GitLab: Nke na-eme ka mbubata ngwa ngwa nke ọrụ ndị e kenyere ha dị mfe. Na mgbakwunye, ọ bara uru ịhazi nkọwa na mpaghara, mepụta ndekọ ọrụ kwa ụbọchị (ndekọ ọrụ) na akpaghị aka wee lelee nnata nke ozi ozugbo mgbe ihe gbanwere na ha.
Ọ na-akwado nhazi nke data nke ọrụ ndị a na-achịkwa: Site na ịmepụta ndetu, inwe ike itinye faịlụ ma ọ bụ mepụta ibe edokọbara maka njikọ, faịlụ na ọbụlagodi iwu.
Na-enyere aka ịhazi usoro ọrụ ahụike: Ekele maka nnabata nke oge ezumike, nke na-echetara ndị ọrụ mgbe oge ezumike zuru. Nwekwara ike ịnakọta usoro nke onwe, nke enwere ike ịlele iji gosipụta usoro ọrụ ọrụ nwere ike ịchọ mgbanwe maka ihu igwe anyị.
Cheta na: Gị Mmepụta ana achi achi na "Super arụpụtaghị" ọ naghị anakọta data ọ bụla, ọ dịghịkwa mkpa iji akaụntụ onye ọrụ ma ọ bụ ndebanye aha. Na mgbakwunye, ọ bụ n'efu ma mepere emepe, ọ ga-adịkwa mgbe niile. N'ikpeazụ, n'ihe banyere GNU / Linux ọ nwere ugbu a installers na ".deb" na ".AppImage" formats, ya mere gị ibudata, nwụnye na iji Ọ dị nnọọ mfe. Ugbu a, ọ na-aga maka nke ya ụlọ mbipute nọmba 6.3.3.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Super Productivity», nke bu ihe bara uru ma di egwu maka Ndepụta Ọrụ (Ime) y Oge Tracker maka programmers na ndị ọzọ dijitalụ ọrụ na mwekota nke Jira, Github na Gitlab; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Super arụpụta: A Iji Mee List & Oge Ndepụta App
Hey ụmụ okorobịa, ụfọdụ n'ime unu na-eji Planner, ọ bụ nwa afọ ọrụ njikwa maka Linux, na a mara mma UI na na nkwado maka Todoist.
Daalụ, Alain. Daalụ maka okwu gị. Enweela m anya na ya, anyị ga-atụle ya maka mbipụta n'ọdịnihu.
SUChat: Izi ozi ezighi ezi banyere ọha na eze
Fedora na-ewebata Kinoite onye ibe ya Silverblue ma na-ezube ịkwaga FreeType na HarfBuzz